Tag: youtube firfircoon videos
Suuqgeynta Youtube: Waa maxay sababta ay wali u tahay qasab!
Arbacada, February 22, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan ku qabanay kulan heer gobol ah podcasters-ka xafiiskeena si aan ugala hadalno faafitaanka fiidiyowga ee Podcasting-ka. Waxay ahayd dood la yaab leh - laga bilaabo teknolojiyad cusub, caqabado farsamo, ilaa xeelado dhab ah oo fiidiyoow bulsheed ah. Wadahadaladaas midkoodna lama waydiinin su'aasha la waydiiyay, miyay tahay inaan fiidiyoow sameyno? Saas ma aha, waxay ahayd wax walba oo ku saabsan sida aan u fulin karno fiidiyowga si aan ula socono dadaallada faylalka sida ugu wax ku oolka badan ee suurtogalka ah. Sida hal podcaster, Chris Spangle, maqal iyo muuqaal ah